बिद्यालयका शिक्षकलाई तलब खुवाउन धान्न देउसी भैलो – Gulmiews
बिद्यालयका शिक्षकलाई तलब खुवाउन धान्न देउसी भैलो
७ मंसिर २०७२, सोमबार १७:०७ Sanju Kauchha
गुल्मी, मंसिर ७ । गुल्मीको एक बिद्यालयले शिक्षकलाई तलव खुवाउन देउसी भैलो खेलेको छ । हस्तिचौर गाविसको वार्ड नं. ८ मा रहेको पालुखा माबिले शिक्षकलाई तलव खुवाउन देउसी भैलो खेलेको हो । बिद्यालयका कक्षा ८, ९ र १० का बिद्यार्थीहरु, शिक्षक, व्यवस्थापन समिती मिली देउसी भैलो खेलेका थिए । बिद्यालयको आर्थिक अबस्था कम्जोर भएपछि बिद्यालयका स्थानिय स्तरबाट राखेका शिक्षकलाई तलव खुवाउन देउसी भैलो खेलेको बिद्यालयका प्र.अ. सुरेन्द्र पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । बिद्यालयले हस्तिचौरका बिभिन्न ठाउँ र छिमेकी गाविसहरुमा पुगी देउसी भैलो खेलेको थियो ।
बिद्यालयको दुई दिन खेलेको देउसी भैलोबाट करिव ६५ हजार संकलन गरेको प्र.अ पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । बिद्यालयको आर्थिक अबस्था कम्जोर हुदै गए पछि शिक्षकलाई तलव खुवाउन समेत कठिन हुदै गए पछि देउसी भैलो आयोजना गरेर केहि आर्थिक रकम संकलन गरेको थियो । देउसी भैलोबाट उठेको रकम शिक्षलाई तलव खुवाउन खर्चिर्ने बिद्यालयले जनाएको छ ।
Comments comments	Related Posts	कुर्घाको त्रिभुवन माबिमा नेबिसंघको इकाइ कार्य समिती गठन...	९ कार्तिक २०७३, मंगलवार १५:५९	गुल्मीको धार्मिक पर्यटन महोत्सवमा ३१ लाख रुपैँया सङ्कलन...	९ कार्तिक २०७३, मंगलवार १५:५५	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	नेपालका वनमा काम गर्ने श्रमिकलाई कानुनले देख्दैन
@gulminewsनेपालका वनमा काम गर्ने श्रमिकलाई कानुनले देख्दैन https://t.co/V340Nm3Yvd #Gulminews #Gulmi29 mins agoRetweetPost Edited: कुर्घाको त्रिभुवन माबिमा नेबिसंघको इकाइ कार्य समिती गठन https://t.co/N5bneOaKdW4 hours agoRetweetगुल्मीको धार्मिक पर्यटन महोत्सवमा ३१ लाख रुपैँया सङ्कलन https://t.co/DiY2qxY2Tq #Gulminews #Gulmi4 hours agoRetweetवैदेशिक रोजगारले पारिवारिक बिखण्डन https://t.co/vJj2B8q36D #Gulminews #Gulmi4 hours agoRetweetदाङमा प्रतिबन्धित औषधी बेचेको आरोपमा गुल्मीका गौतम पक्राउ https://t.co/EGrAOOoHOx #Gulminews #Gulmi4 hours agoRetweet	गुल्मीको मौसम	Partly Cloudy	16 °C	26 Oct 2016